Momba anay - Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.
Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2005, izay manokana amin'ny famolavolana sy famokarana tranolay tranofiara, tranobe, tafo, tranolay lakolosy, tranolay canvas, tranolay fitobiana, sns. Ny vokatray dia nanondrana tany amin'ny firenena sy faritra mihoatra ny 30 toa an'i Etazonia, Britain, Australia, New Zealand, Norvezy, Europe, America ary Azia atsimo atsinanana. Sns
Taorian'ny fandrosoana sy fanavaozana maharitra efa ho 20 taona, Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd. dia lasa mpanamboatra tranolay malaza ao Shina Izay manana marika "Arcadia" ivelany.
miaraka amin'ny ekipa teknika 8 olona antsika, tongasoa ny baiko OEM sy ODM, avy eo azonay atao toy ny sary, santionany. Ankoatr'izay, manana ekipa mpivarotra matihanina izahay, miaraka amina mpivarotra 6, mpivarotra 2 aorian'ny varotra ary mpiasa an-tsena 2 izay manampy amin'ny fandaminana ny fandefasana sy ny antontan-taratasy. Ny tanjonay dia ny hanome tolotra matihanina, ara-potoana ary manorina.
Ny fifehezana kalitao amin'ny fividianana ara-materialy, avy eo mandritra ny famokarana .Rehefa vita ny filaharana, dia hanangana pcs tsirairay izahay ary hanao fizahana tsirairay, mba hahazoana antoka fa tsara kalitao ny rehetra alohan'ny fanaterana.
Tranofiara tranofiara: gorodona malefaka (7ft, 9ft, 12ft), gorodona mafy (aforitra, valopy aloha)
Trano ambony tampon-trano: tranolay malefaka ambony tampon-trano, Trano an-tampon'ny tampon-trano mafy, Awnings
Tranolay: 3m, 4m, 5m, 6m, 7m
Trano fanjonoana: sosona tokana, fomba fanafana
Swag: Swag tokana, Swag roa
1. Manana ekipa teknika matihanina izahay, ny santionany sy ny sary dia azo namboarina
2. Orinasa manana mpiasa maherin'ny 80, mpiasa mahay sy za-draharaha
3. Fanaraha-maso fifehezana kalitao hentitra mba hahazoana antoka fa 100% no mahay
4. Fitaovana lamba isan-karazany mifanaraka amin'ny vidiny sy ny kalitaon'ny takian'ny mpanjifa samy hafa
5. ambany MOQ
6. Afaka mamaly ao anatin'ny 12 ora